मलेसियामा ट्याक्टर चलाएर मासिक RM 4500 कमाउछन यी बंगलादेशी कामदारले - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
मलेसियामा ट्याक्टर चलाएर मासिक RM 4500 कमाउछन यी बंगलादेशी कामदारले
हालै, मलेसियामा एक बंगलादेशी व्यक्तिले आफ्नो पे स्लिप खुलासा गरेको टिकटक भिडियो सोशल मिडियामा भाइरल भएको छ।
भिडियोमा एक व्यक्तिले ट्र्याक्टरमा बसेका विदेशी कामदारलाई आफ्नो मासिक तलबको बारेमा सोधेको सुनिन सकिन्छ । विदेशी कामदारले भने आफ्नो मासिक पारिश्रमिक ५ हजार ४ सय रुपैयाँ !
त्यसपछि उसले कटौती पछि RM4,917 को आफ्नो पे स्लिप देखाउन अगाडि बढ्छ। बंगलादेशी पुरुष लडाङ मवार, केमामान, तेरेङ्गगानुमा ट्याक्टर चालकको रूपमा काम गर्छन्।
यो भिडियो ३ दिन अगाडि सेयर गरिएको थियो र यो लेख्ने समय सम्म १,७५,००० भन्दा बढी भ्यु र ६,५०० भन्दा बढी लाइक प्राप्त गरिसकेको छ।
केही मलेसियनहरूले यस्तो कमाई हुने जागिरका लागि कहाँ र कसरी आवेदन दिन सक्छन् भनेर सोध्न थाले। यसैबीच, केही नेटिजनहरूले उनको घर बंगलादेश मा यति ठूलो रकम पठाएकोमा प्रशंसा पनि गरेका छन्।
मलेसिया र खाडिको रोजगारी कोरोनाको कारण बन्द हुने डर, यस्तो छ तयारी..
पछिल्लो समयमा नेपाली श्रमिकको प्रमुुख गन्तव्य खाडी क्षेत्रका देशमा पनि कोरोना सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ ।
कोरोनाको सङ्क्रमण बढेपछि रोकथामका लागि आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्डमा कडाइ गर्न थालेका छन् । पछिल्ला तीन वर्षदेखि कतार र साउदी नेपाली बढी जाने श्रम गन्तव्य देश हुन् ।
पछिल्लो सातादेखि कतारमा दैनिक औसत ५०० जना कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमित देखिने गरेका छन् भने साउदी अरबमा दैनिक औसतमा ७०० भन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित थपिने गरेका छन् । यस्तै कुुवेत र यूएईमा दैनिक एक हजारको हारहारीमा नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएको जनाइएको छ ।
कतार, साउदी, यूएई, कुवेत र ओमानमा रहेका नेपाली दूतावासले सूचना सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित देशले लागू गरेका सबै स्वास्थ्य मापदण्ड तथा रोकथामका उपायको कडाइका साथ पालना गर्न नेपालीलाई अनुरोध गरेका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्दै गएका नेपालीका मुख्य श्रम गन्तव्य देशमा रहेको राजदूतावासले सूचना निकालेर मात्रै दायित्व पूरा नहुने भन्दै वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुुरुङले बढ्दो सङ्क्रमणका कारण नेपाली जोखिममा परेको खण्डमा उद्धारका लागि अहिलेबाटै पूर्वतयारीमा रहनुुपर्ने बताउनुुभयो ।
साउदी अरबको रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार साउदीमा दुुई साता अगाडिसम्म दैनिक कोरोना सङ्क्रमण दर ३० जनाभन्दा कम रहेकामा अहिले दैनिक ७०० माथि पुगेको छ । साउदीले बाहिर निस्किँदा वा कार्यस्थलमा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने र डेढ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने नियम लगाएको दूतावासको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।